Izigwenxa zixhaphaza i-Ring Ring Tracking Device? I nyaniso
I-rumor ye-intanethi ilumkisa ukuba izigwenxa zihambisa iifayile zentloko zamahhala, ii-fobs eziphambili, okanye iintambo eziphambili ezixhotywe nge-chips zokulandelela ezenza ukuba izigwenxa zilandele amaxhoba kwaye ziphanga. Nangona le ngxelo yaqala ukujikeleza ngo-2008, ityala kwakhona ngokuphindaphindiweyo.
Ukuba ufumana i-imeyile efanayo okanye i-media posting, khangela iinkcukacha phambi kokuba uphumelele kubo bonke abahlobo kunye nosapho. Yayisetyenziswe ngokukhawuleza emva kokuba ibonakale, kodwa iindlebe ze-intanethi azibonakali zife, okanye zitshatyalaliswa ngokwenene.
Ukusasaza ukususela ngo-Agasti 2008
I-imeyile ibenegalelo nge-Apreli 23, 2010:
Isihloko: ISICWANGCISO ESIKHONO: Ukuhambisa iiRandi eziKhiye njengeCandelo lokuThengisa
XALISA IMIKOLO YAKHO, INTSAPHO NABAFAKAZI NAMUHLA !!!!
* Awazi ukuba uyinyani, kodwa kukulungele ukuba ube kwicala elikhuselekileyo. *
Ngolwazi lwakho nceda:
Kukho idibaniselwano yezigwenxa ezizibonakalisa njengabagqugquzeli bezentengiso abanikela ii-key rings / holders kwizikhululo zepetroli okanye kwindawo yokupaka.
Ezi zondlo / abanikazi abakhulu banesimboli secebo lokulandelela esivumela ukuba bakulandele. Nceda ungawamkeli.
Bakhetha abathintekayo babo abanokuthi bayenze kakuhle kwaye ukuba uyamkela, ngoko uya kuba sezintlu zabo. Abanikazi abakhulu banamanqabileyo ukugatya ukumkela kodwa khumbula ukuba unokuphelisa ukuhlawula ngaphezu komnini oyintloko ekubandakanya ingozi ebomini bakho.
Nceda ucebise amalungu akho entsapho ngokunjalo.
Umzekelo # 2
Le imeyile yangaphambili ibonakalise icebo kwimithombo e-Afrika.
I-imeyili enegalelo kwi-Oktoba 6, 2008:
UKUPHILA KWE-SECURITY ALERT - AbakwaNigeria eSiteshini seGesi
Ama-syndicates akhiwa ngabantu baseGhana nabakwaNigeria banikezela izitya eziphambili kwiitishi zegesi. Musa ukuwamkela, njengoko iisongo eziphambili zinesixhobo sokulandelela esivumela ukuba bakulandele.
Phambi kwesi silumkiso kubahlobo kunye nosapho. Umhlobo undixelele ngasentla kwaye wabonisa ukuba aba bafana bakhetha nje ixhoba labo elibonakala liyenza kakuhle kwaye badlala iqhinga.
Abanini abalulekileyo endixelelwayo bumnandi ukuba banqabele ukuqokelela kodwa khumbula ukuba unokuphelisa ukuhlawula ngaphezulu kuquka ubomi bakho ukuba awukwazi ukumelana.
Uhlalutyo lweNkcazo yokuThola iNkqubo ye-Intanethi ye-intanethi
Le ngxelo engenasiphelo yaphuma kumkhankaso wokupromotha ka-2008 ngelixa iKaltex yaseMzantsi Afrika, i-subsidiary yaseKevron, yanikezela iifobs eziphambili ze-solar-power enabled to advertise its diesel fuel. Ifob nganye iqukethe i-LED, ibhetri kunye ne-computer chip.
Kubonakala ngathi, umntu waqhawula esinye sezixhobo, wafumanisa i-chip ngaphakathi, waza waguqa kwisigqibo sokuphosakela ukuba kwakuhlobo oluthile lwe-RFID. I-rumor ukuba ngaba ngokwenene "idivaysi yokulandelela" esetyenziswe ngabaphuli-mthetho yabhengezwa kwintetho yeediyo yomsakazo kwaye yafumanisa indlela yayo kwi-intanethi.
UCaltex waphendula ngengxelo :
"Ezi ziqhosha eziphambili azikhange zenze enye injongo kunokuba yenze i-brand (i-caltex Power Diesel) ukuqaphela. Ayiklanyelwe ukuba isebenze nayiphi na ifowuni yokulandelela amadivayisi kwaye akufuneki ukuba kudideke."
Nangona kunjalo, i-rumor iyaqhubeka ijikeleza ngeposi ye-imeyile kunye nezentlalo zentengiso, njengoko kuboniswe kwimibono ye-2010 kunye nokubonwa ngo-2014.
Ngaphambi kokuba uthumele naluphi na amahemuhemu, yenza ukhenketho lwewebhu kwi-text verbatim. Uyakwazi ukuza kunye nezinye iziganeko ezinjengeemimiselo ezingentla. Emva koko unokuqiniseka ukuba oku akuyiyo igrafu entsha.
Imali yeMidiya malunga neCaltex Power Diesel
I-Chevron yaseMzantsi Afrika, 22 uAgasti 2008
I-Key Key Paranoia Prank
Imeyili & Guardian , 28 Agasti 2008
Iingxowa, iCapos kunye neConsiglieres: Ulwakhiwo lwe-American Mafia
Khanyisa izibane zakho kunye nokufa!
Ubuqhetseba: Ulwaphulo-mthetho olungenakuXhatshazwa?
Ijele lase-US kunye ne-Jail Population Tops 2 Million
Iimpawu ze-Black Metal ezisemqoka
Indlela yokuguqula iiGrama kwiMoles - Umzekelo weNgxaki
Indlela yokwenza i-Tandem Kayak
Yintoni oyenzayo xa i-Tire yakho yokunyanzela ukukhanya kukhanya
Inkcazo yeNtlalo yeNtlalo kwi-Sociology
Indlela yokwenza i-Gel evuthayo - Recipe
Ubungakanani Bokuhambisa I-Yahtzee